Ukuphupha ngeparadesi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Inkolo kunye neenkolelo azidlali nje kuphela indima ebalulekileyo kubomi babantu bemihla ngemihla, kodwa banokufumana indlela eya emaphupheni ethu. Umfanekiso wephupha ovela rhoqo rhoqo yiparadesi yeBhayibhile, ekwabizwa ngokuba yi "Gadi yase-Eden". Kwenzeka ukuba ephupheni sizifumana siseparadesi, apho uAdam noEva bakwafunyanwa ngokutsho kwebali lendalo. Emva koko sibona igadi enemibala eqaqambileyo eneentlobo zonke zezityalo nezilwanyana, iziqhamo ezitsha kunye nelanga.
Nangona kunjalo, iimvakalelo ezinje zivusa amaphupha kuthi azisoloko kufuneka zibe zezintle kuphela. Ngamanye amaxesha ukuhlala kwigadi yase-Eden nako kudala ukungaqiniseki okanye imvakalelo yokudideka. Ukutolikwa kwesimboli yephupha "iparadesi" kuxhomekeke kwezi zivakalelo.
Ezinye zeemeko zamaphupha zenzeka rhoqo kunabanye ngokunxulumene nomxholo weparadesi. Masiqale ngokujonga la maphupha ngaphambi kokuba siqhubele phambili kutoliko lophawu "lweparadesi":
1 Isimboli yamaphupha «IParadesi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Intaka yeparadesi ephupheni.
2 Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ukutolikwa ngokubanzi.
3 Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ingcaciso yengqondo
4 Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ukutolikwa kokomoya
Isimboli yamaphupha «IParadesi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Intaka yeparadesi ephupheni.
Intaka yeparadesi yintaka yengoma enentsiba entle kunye neentsiba ezinde, ezigobile zomsila. Ngokubanzi, iintaka kuhlalutyo lwamaphupha zimele imimoya yasimahla enezimvo ezininzi kunye notyekelo lweenkqubo zokucinga ezingalawulekiyo. Nabani na oqonda intaka entle enemibala-bala eneentsiba ezinde ephupheni, mhlawumbi ehlathini okanye kwigadi yasezulwini, uyakufumana umzuzu wokonwaba ongenaxhala. Ngenxa yoko, kunokuvela izimvo ezintsha eziqhubela phambili umntu ophuphayo ebomini.
Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Iparadesi ene-oasis inokuba neentsingiselo ezahlukeneyo njengophawu lwephupha. Ngokusisiseko, iphupha lokuhlala eparadesi lithembisa ngokulungileyo impilo y amaxesha okonwaba kuba kwiparadesi unokufumana ukutya okuyintabalala kunye nayo yonke into oyifunayo. Olu toliko lusebenza kuzo zonke iinkalo zobomi, ngakumbi kubomi bemihla ngemihla kunye nolwalamano lothando. Amaxhala emali kunye neengxaki zokunxibelelana zikude kwaye uzive ulungile.
Nabani na ophupha ngokufikelela kwiparadesi, mhlawumbi nezulu, ulangazelela okungakumbi kubomi bemihla ngemihla ukuqonda. Iqela elinomdla lifezekisa okuninzi, kodwa linokuziva ngathi ukuzibophelela kwakhe akuxabiswanga ngokwaneleyo ngoontanga bakhe bonke. Ukungena kwiparadesi kufanekisela umvuzo iphupha elikholelwa ukuba lifanelekile.
Iimvakalelo ezingalunganga ezivela ephupheni kunye nokukhangela iparadesi okanye ukungena kumyezo we-Eden kunokuba ngaphambili Ukuqonda ukulumkisa. Ukuba umntu ekuthethwa ngaye uziva engakhuselekanga, sele beqondile ukuba akufuneki bazixakekise. Kwangelo xesha, kubalulekile ukuthoba ulindelo lwakho kwizihloko ezithile. Ngaphandle koko, ukuphoxeka kunye nentlungu kusongela.
Ngapha koko, iparadesi ngokubanzi ikwangumqondiso ukugqibelela nokuba msulwa. Kuxhomekeke kubalinganiswa bephupha, indlela oziphethe ngayo kunye nendlela ophila ngayo, umfanekiso wephupha kufuneka ukuqinise kubukho bakho okanye ubonise indlela elungileyo.
Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ingcaciso yengqondo
Ngokombono wengqondo, iparadesi ephupheni luphawu lokuba umntu ekuthethwa ngaye ufuna ntoni ukuzola kwangaphakathiUkujonga ukuzola kunye nokulingana kwengqondo. Ufuna ukuza kuthi ga ngokwam kwaye ukwazi ukwamkela ngokupheleleyo onke amalungu obuntu bakho. I-subconscious yephupha sele iqondile ukuba ifuna ixesha kunye nokuphumla koku.
Kuya kufuneka uzive ukhuthazwe kwaye ukhuthazwe luphawu "lweparadesi" ukuze uzinike ixesha lokuthatha umhlala-phantsi. Ngale ndlela, umntu unokufunda ukuzifumana kwaye afezekise ulonwabo. Oku kunokukunceda uphinde ufumane amandla owafunayo kubomi bemihla ngemihla obunzima.
Uphawu lwephupha «iParadesi» - Ukutolikwa kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga, iparadesi ngumfanekiso obalulekileyo wephupha. Ibonisa ukuba umntu ochaphazelekayo ukunye Imvelaphi yobukho bakhe umqeshwa. Kule meko, uyakuqonda ukugqibelela komphefumlo wakho, nto leyo ekhokelela kulonwabo.